Mufananidzo waJesu wemuSamariya Akanaka | Upenyu hwaJesu
MuSamariya Anoratidza Kuti Muvakidzani Akanaka
UPENYU HUSINGAPERI HUNOWANIKWA SEI?
Jesu achiri pedyo neJerusarema, vaJudha vakasiyana-siyana vanouya kwaari. Vamwe vanoda kudzidziswa naye uye vamwe vanoda kumuedza. Mumwe muJudha anonyatsoziva Mutemo anobvunza kuti: “Mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi?”—Ruka 10:25.
Jesu anoona kuti murume uyu haasi kungobvunza zvekuda kuziva. Chinangwa chake chinogona kunge chiri chekuita kuti Jesu apindure zvinoita kuti vaJudha vagumbuke. Jesu anoona kuti murume uyu anotova nemaonero ake panyaya yacho. Saka anopindura zvine ungwaru kuti murume uyu ataure zvaari kufunga.
Jesu anobvunza kuti: “MuMutemo makanyorwei? Unoverenga sei?” Murume uyu akadzidza Mutemo waMwari, saka ndiwo waanoshandisa pakumupindura. Anotaura mashoko ari pana Dheuteronomio 6:5 naRevhitiko 19:18 achiti: “‘Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nesimba rako rose nepfungwa dzako dzose,’ uye, ‘muvakidzani wako sezvaunozviita.’” (Ruka 10:26, 27) Ndiyo mhinduro yacho here?
Jesu anoudza murume wacho kuti: “Wapindura zvakarurama; ‘ramba uchiita izvi uye uchawana upenyu.’” Nyaya yacho inobva yapera here? Murume uyu haasi kuda kungoudzwa mhinduro yakanangana nemubvunzo wake chete asi ari kuda “kuzviita akarurama,” kuti audzwe kuti maonero ake panyaya yacho akarurama, zvoita kuti anzwe asina mhosva pamabatiro aanoita vamwe. Saka anobvunza kuti: “Muvakidzani wangu anombova ani?” (Ruka 10:28, 29) Mubvunzo iwoyo unoita sewakapusa, asi uri kureva zvakawanda. Sei?
VaJudha vanotenda kuti shoko rokuti “muvakidzani” rinoshanda kuvanhu vanotevedzera tsika dzechiJudha chete, uye zvinoita sekuti Revhitiko 19:18 inotsigira pfungwa yacho. MuJudha anotogona kuti “hazvisi pamutemo” kuwadzana nemunhu asiri muJudha. (Mabasa 10:28) Saka murume uyu zvimwe nevamwe vadzidzi vaJesu pachake, vanoona sekuti vanenge vakarurama chaizvo kana vakabata vamwe vavo vechiJudha zvakanaka. Asi vanofunga kuti vanogona havo kubata munhu asiri muJudha zvakaipa nokuti haasi “muvakidzani” wavo chaiye.
Jesu angagadzirisa sei maonero aya nenzira inoita kuti asagumbure murume uyu nevamwe vaJudha? Anozviita nekutaura kanyaya. Anoti: “Mumwe murume akanga achibva kuJerusarema achidzika kuJeriko uye akasangana nemakororo, ayo akamutorera zvose, akamurova, akaenda, achimusiya ava kuda kufa.” Anoenderera mberi achiti: “Sezvineiwo, mumwe mupristi akanga achidzika nomugwagwa iwoyo, asi, paakamuona, akapfuura nokune rumwe rutivi. Saizvozvowo, muRevhi, paakasvika panzvimbo yacho akamuona, akapfuura nokune rumwe rutivi. Asi mumwe muSamariya aifamba nomugwagwa wacho akasvika paaiva uye paakamuona, akasiririswa.”—Ruka 10:30-33.
Murume ari kuudzwa nyaya iyi naJesu anonyatsoziva kuti muJeriko munogara vapristi vakawanda nevaRevhi vanobatsira patemberi. Vachibva kutemberi, vanofamba makiromita 23 vachidzokera kumba. Mugwagwa wavanofamba nawo unotyisa nekuti une makororo anohwandira vanhu. Kana mupristi nemuRevhi vakaona mumwe muJudha ari mudambudziko, havafaniri kumubatsira here? Munyaya yake Jesu anorondedzera kuti havana kumubatsira. Munhu akatomubatsira muSamariya, murume aibva kuvanhu vanoshorwa nevaJudha.—Johani 8:48.
MuSamariya wacho akabatsira sei muJudha akanga akuvara? Jesu anoenderera mberi achiti: “Akasvika paaiva, akasunga maronda ake, achiadira mafuta newaini. Akabva amukwidza pachipfuwo chake, akaenda naye kuimba yevanenge vari parwendo, akamutarisira. Zuva rakatevera racho akabudisa madhinari maviri, akaapa muchengeti weimba yevanenge vari parwendo, akati, ‘Mutarisire, uye zvinhu zvose zvauchashandisa zvinopfuura madhinari aya, ndichakuripira pandichazodzoka pano.’”—Ruka 10:34, 35.
Apedza kutaura nyaya iyi, Mudzidzisi Mukuru, Jesu, anobvunza murume uya mubvunzo uyu unoita kuti afunge: “Ndiani weava vatatu waunoona kuti akazviita muvakidzani womurume akasangana nemakororo?” Zvimwe murume wacho anonyara kuti ati “muSamariya,” saka anopindura achiti: “Uya akamunzwira ngoni.” Jesu anobva anyatsobudisa pachena chidzidzo chiri panyaya yacho paanomukurudzira kuti: “Enda unoita izvozvo.”—Ruka 10:36, 37.
Apa Jesu ashandisa nzira yekudzidzisa inobudirira zvikuru! Kudai Jesu anga angoudza murume uyu kuti kunyange vanhu vasiri vaJudha vavakidzani vake, iye nevamwe vaJudha vanga vakateerera vangadai vazvibvuma here? Zvimwe vaizozviramba. Zvisinei, kanyaya kaataura achirondedzera zvinhu zvinonyatsozivikanwa nevateereri vake, kaita kuti mhinduro yemubvunzo wekuti, “Muvakidzani wangu anombova ani?” ibve yabuda pachena. Muvakidzani chaiye ndiye uya anoratidza rudo nemutsa izvo zvatinoudzwa neMagwaro kuti tinofanira kuita.
Chii chingava chaita kuti mumwe murume abvunze Jesu kuti upenyu husingaperi hungawanikwa sei?
VaJudha vanoti vavakidzani vavo ndivanaani, uye nei vachidaro?
Jesu anojekesa sei kuti muvakidzani wedu ndiani?
Jesu airevei paakati tinofanira kuda muvakidzani wedu? Tingazviita sei?